Lacago Dheeraad ah oo lagu soo rogay dadka ka Dhoofaya Garoonka Aadan Cadde | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Lacago Dheeraad ah oo lagu soo rogay dadka ka Dhoofaya Garoonka Aadan Cadde
Dadka ka dhoofaya garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo rogay lacago dheeraad ah, waxaana dadkan laga qaadayaa lacag u dhaxeysa 5- Dollar ilaa 10 Dollar marka ay garoonka ka dhoofayaan.
Ashkir Cabdi oo ah Mareeyaha Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ayaa sheegay in mudo Sedex bil ah lagu soo rogay in lacago dheeraad ah laga qaado dadka ka dhoofaya garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde.
Maareeyaha ayaa tilmaamay in lacagahan laga qaadayo dadka dhoofaya loogu tala galay in wax loogu qabto dadka ay saameysay abaaraha, waxa uuna intaa raaciyay in lacagaha lagu qaadayo boono ay jareyso Wasaarada Maaliyada.
Waxa uu sheegay Maareeyaha garoonka Aadan Cadde in go’aanka in uu ka yimid kulan ay golaha Wasiirada ku yeesheen Muqdisho, waxa uuna cadeeyay in dadka u dhoofaya gobolada dalka laga qaadayo 5- Dollar halka kuwa dibada u baxaya laga qaadayo 10 Dollat.
Dadka ka dhoofaya garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ayaa horey dhibaato ugu qabay lacago si farsameesan loogu soo rogay, waxaana lacagahan hada magaca abaaraha lagu qaadayo laga cabsi qabaa in ay gasho jeebka dad gaar ah waxna aan loogu qaban dadku abaartu heyso.